… Ary ny fanahy ? | NewsMada
… Ary ny fanahy ?
Fomba fitenin’ny mpanao politika ankehitriny ny hoe manan-karena i Madagasikara. Hatreto aloha, kabary ambony vavahady io fa ny any am-bilany sy ny am-paosin’ny tsirairay ihany ny mitsara ny fahamarinan’izany. Na izany na tsy izany, tena manan-karena tokoa ity Nosy ity… manan-karena olona manampahaizana. Raha diso izany, angamba ho vitsivitsy ihany ny sahy nirotsaka hofidina filoham-pirenena. Matoa mahasahy, efa mahazo antoka amin’ny fahaizany mitantana sy mampandroso.
Tsy mandiso izany rahateo ny paikady sy ny fandaharanasa efa tanisain’ny sasany amin’ireo kandidà ireo, mandritra izao fitetezam-paritra mialoha ny fampielezan-kevitra izao. Fampihenana ny vidim-piainana, fitantanana ny harena an-kibon’ny tany, famoronana asa, fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina, fanatsarana ny sosialim-bahoaka, fanatsarana ny fandriampahalemana, sns. Mifantoka amin’ireo, matetika, ny vaindohan-draharahan’ny kandidà tsirairay.
Tena manampahaizana tokoa ireto vonona ny hanolo-tena hanavotra ny firenena ireto satria hita taratra amin’ireo ny fahatsapany ny aretina maharary ity firenena ity. Tena manam-pahalalana tokoa izy ireo, raha ny hevitra matipaika enti-miatrika sy manasitrana izany aretina maro isan-karazany izany. Saingy,…
Mba lasa ihany ny saina ary inoana fa tsy vitsy ny manana ity ahiahy ity. Rehefa nikororosy fahana ny Malagasy, nihanahantra koa ny fanahiny. Indraindray aza, latsa-bava mihitsy ny maro hoe mbola misy ihany ve ny maha olombelona ny olombelona, manoloana ny tranga nampihoron-koditra sy mampivarahontsana, nifanesy teto? Toa angano sisa ny hoe fihavanana, firaisankina, raha tsorina, potika ny fiarahamonina malagasy.
Raha efa vonona ny fanafody hanasitranana ny fahantrana, aiza ho aiza kosa ny politika na ny fandaharanasa hoenti-manarina ny saina amam-panahy ? Mahagaga, toa tsy misy miresaka izany sa tsy vaindohan-draharaha ? Asa … Anjarantsika mpifidy ny mandinika !